Gbasara anyị - Ikkaro
Aha m bụ Nacho na abụ m Injinia Ọrụ site Gbanwee (Mahadum Polytechnic nke Valencia)
Na weebụsaịtị a, m ga-eleba anya na isiokwu m nwere mmasị na ya na nke m na-etinyebeghị n'ime ya, n'ihi enweghị oge na ego ...
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na enweghị m oge ma ọ bụ ego, mana enwere m ọchịchọ karịa, nke na-akwụ ụgwọ ma ọ dịkarịa ala.
Yabụ m ga-ekwu maka:
Enwere m olileanya na ọ masịrị gị
Ikkaro amuru na June 2006… dika oru ngo ikwu banyere ya ihe na-efe efe; kita, boomerangs, ngwaọrụ redio, Wdg
N'ihi ya aha ya metụtara Icarus el nwa Daedalus, onye gbanahụrụ n'ụlọ mkpọrọ ha na nku nku nke nku na wax. Na mgbapụ ya Icarus malitere ịrịgo anyanwụ, ruo mgbe wax na nku ya gbazee.
A sị na o chere na ya ga-emecha bụrụ ihe ọ bụ taa, ọ nwere ike ịhọrọ aha ọzọ.
N'oge mmalite ya, anyị dere isiokwu ole na ole na ozi gbasara egbe na boomerangs a hapụkwara weebụ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ, ruo mgbe anyị ga-amaliteghachi ọrụ ahụ ma ọ ghọọ njikọta n'etiti blog otu esi eme ma ọ bụ otu esi eme na ụdị nile nke ịmata ihe na ụlọ oru ngo.
Ọ bụrụ n’ị nwere mmasị ịmatakwu banyere anyị, ị nwere ngalaba ọdịbendị, nke nta nke nta anyị ga-edegharị akụkọ ihe mere eme anyị.
Akụkọ Ikkaro Logo
Onye edemede nke ikkaro logo bụ Alejandro Polando (alpoma) si Teknụzụ gaferela, nke meriri n'asọmpi logo nke anyị na-eme site na https://en.99designs.es/logo-design/contests/logo-blog-experiment-7757/entries
N'okwu onye okike ya, njirimara ahụ na-anọchite anya ya
rọketi nwere mmetụta nwatakịrị nke chọrọ igosipụta ngwakọta nke agụụ na aghụghọ nke na-adịkarị mkpa mgbe ọ na-abịa n'ịrụ ụdị ụlọ obibi niile
Chọrọ ịma ihe niile gbasara Ikkaro?
Tọrọ ntọala na 2006 iji bido ikwu maka ngwa na-efe efe, ọ ghọrọ ebe emere ngwa ngwa ịhapụ ihe niile m hụrụ n'anya gbasara DIY, Ngwa, Ezi ntụziaka na obere ihe.
Na ngalaba anyị na-anakọta usoro isiokwu site na mgbe anyị na-ekwu maka web, ndị pere mpe na ndị pere mpe. Afọ ole na ole gara aga, anyị kwuru maka ọnụ ọgụgụ, echiche maka ọrụ dị ka ọgbakọ a, obodo, mgbe anyị mechiri ọgbakọ a, mgbe anyị laghachiri n’April na imechi ya, hahaha, kamakwa maka ịgba mgba, ndị meriri ya, wdg.
Ma ọ bụ na ihe karịrị afọ 10 na-enye ọtụtụ, iji nwalee ọtụtụ ihe ma hụ ihe anaghị arụ ọrụ na ihe kwesịrị ịgbanwe. Ma ọ bụ nanị imechi ihe na oge adịghị mma.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe oru ngo a, amaba ntakịrị n'ime ihe anyị hapụrụ gị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, egbula oge ịjụ ;-)
Amaghị m ma ọ bụrụ na ngalaba a nwere uche taa ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ ka mma ịhapụ ihe niile nke ọma ma mechie n'otu post ma melite dị ka mkpa. Aga m enye ihe a ma obu na m mee nnukwu akụkọ banyere Ikkaro n'ime afọ iri na abụọ ndị a na ndị fọdụrụ
Lee ị nwere akụkọ ntolite anyị, ọnụ ọgụgụ, ndị ọrụ ... Ihe niile gbasara onye anyị bụ
Anyị na-arụ ọrụ ọhụụ ọhụụ ogologo oge ma anyị mechara nwee ike ịtọhapụ ya.
Nke a bụ Deddalus, a ebi akwụkwọ ụlọ pụrụ iche na Mee N'onwe Gị, otu esi eme, mee ya n'onwe gị, sayensị na teknụzụ.
Anyị kwenyere na enwere mkpa dị mkpa maka ụdị ọdịnaya a n'asụsụ anyị ma anyị chọrọ inye akwụkwọ na monograph na DIY, sayensị na teknụzụ, nke kachasị mma ma nwee nkọwa zuru oke.
Na enweghị nkwenye nke katalọgụ, anyị nwere ike ịza ajụjụ n'ọtụtụ isi ihe dị mkpa.
Akwụkwọ niile / monographs ga-abụ n'efu DRM
Maka akwụkwọ ọ bụla a zụrụ, ị ga-enwe ohere ịnweta ụdị kọmputa ọ bụla nke anyị na-ebipụta ya (pdf, epub, mobi, wdg) yana mmelite ọ bụla anyị na-eme.
Na mgbakwunye na ahịa ọ bụla, anyị ga-arụ ọrụ na ndebanye aha kwa afọ dị ọnụ ala.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe niile ozi ọma si nkwusa. Tinye Deddalus ma denye aha na akwụkwọ akụkọ ahụ.
Ajuju obula i nwere inwere, degara anyi kọntaktị@deddalus.com
Na Ikkaro anyị nwere akaụntụ ndị mepere emepe na isi netwọk mmekọrịta. Anyị anaghị ede otu ihe na netwọkụ mmekọrịta niile. Onye obula nwere usoro okike ya ma anyi dozie ya nke dikwa anyi nma.
Ndị a bụ ebe anyị kacha arụsi ọrụ ike
Anyi ji anya na ese
Anyị mekwara dị ka ule ọ bụ ezie na anyị anaghị eji ha ugbu a.
Otu na Xing
Ọ bụrụ na ị na-atụ uche ọ bụla na ị na-ekere òkè na / ma ọ bụ chọrọ ịkwado mgbanwe. Hapụ ikwu.
Anyị ga-echere gị…
N'ime ihe karịrị afọ 7 nke ndụ, blọọgụ a agbanweela ọtụtụ, ọtụtụ mgbanwe, ọkachasị n'ogo nke imewe na arụmọrụ, mana ọ na-arụ ọrụ mgbe niile na Drupal.
Oge nke a ka ihe siri ike. Anyị agbanweela njikwa ọdịnaya site na Drupal WordPress.
Amaara m na ihe ndị na-eso ụzọ Ikkaro nwere mmasị bụ na a na-enyefe ọdịnaya dị mma yana ọtụtụ oge. Ya mere nkọwa na ihe kpatara mbugharị na-aga na njedebe nke isiokwu ahụ. Lee ndozi anyị tinyegoro na ndị anyị nwere olile anya.
Kedu ihe ị ga-atụ anya site ugbu a gawa?
Mbugharị ejirila oge m buru ibu. Site ugbu a gaa na ọ bụ ezie na anyị ga-aga n'ihu polishing "nkọwa" Enwere m olileanya maliteghachi ebipụta isiokwu.
Echiche n'ime afọ a na mgbakwunye na ịga n'ihu na-ebipụta ga-abụ nyochaa ọdịnaya "lazier" nke blọọgụ ahụ ma degharịa ya, kwuo ya ma ọ bụ n'ihe gbasara ndepụta, melite ha. Yabụ na edemede ọ bụla Ikkaro na-atọ ụtọ.
Ihe kachasị dị ịtụnanya bụ eziokwu ahụ kwuru na-arụ ọrụ ọzọ. Obi abụọ adịghị ya na nnukwu akụkọ anyị gbaghara na ha ka na-emeziwanye tupu ebipụta ya.
Igwe nchọ ahụ na-arụ ọrụ ọzọ. Ọ bụ n'elu blog.
Anyị nwere ọhụrụ version maka mobile na mbadamba dị jụụ. Lelee ya ;-)
Na Mbugharị anyị ehichapụla ọgbakọ a na ọtụtụ peeji nke sitere na mgbe anyị kwere ka mmadụ niile dee ma ha atụnyeghị ihe ọ bụla. Anyị ahapụwo ndị na-akpali mmasị.
Anyị na-aga hazigharia edemede niile, dogharia ederede ma mepụta peeji ọdịda iji gosipụta ọdịnaya n'ụzọ dị n'usoro ma kwado ọrụ saịtị ahụ.
Anyị kwenyere na edozila nsogbu nke ihe oyiyi site na ndenye aha nke akwụkwọ akụkọ ala. Debanye aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma nata na email gị ozi ọma anyị na-ebipụta
Anyị nwere ọtụtụ nkọwa iji melite. Ọ dịịrị gị mfe ịchọta ihe ndị dị ịtụnanya, ịkwaga anaghị adị mfe, ọkachasị maka saịtị buru ibu, yabụ ee ị na-akọ nsogbu M ga-enwe ekele maka ya.
Ọ bụrụ n ’esoghị anyị na netwọkụ mmekọrịta ị nwere ike ịme ya, anyị na-enye ọdịnaya dị iche iche na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla :)
Anyị na-dị nnọọ ulo oru a magazine flipboard raara nye Mee N'onwe Gị.
Banyere Drupal ka WordPress Mbugharị
Maka ndị nwere mmasị n’ihe ndị a niile. Ee, na njedebe m hapụrụ onye ọ hụrụ n'anya Drupal. Na blọọgụ ahụ sitere na Drupal 5, 6 na 7 ma mụtala site na ịme ọtụtụ nyocha saịtị (nnukwu ndudue)
Na njedebe, ndị njikwa bụ ngwaọrụ ma anyị ga-eji nke kachasị dabara na mkpa anyị nwere. Ihe dị mkpa n'ezie bụ ihe anyị ji ngwaọrụ ndị a na ohere ha na-enye anyị. Anyị gbanwee gaa WordPress:
iji uru-esi nke Blog akụkọ. Ana m arụ ọrụ ebe a. Anyị na-ejikwa blọọgụ 200, ihe niile dị na wordpress na anyị nwere otu ndị mmepe, SEO, na ndị ọkachamara na isiokwu dị iche iche bụ ndị raara onwe ha nye ịkwalite na ịkwalite blọọgụ na ihe ịchọrọ ka m gwa gị, ọ bụ ihe ihere ịlafu ihe ọmụma a niile na aghaghị ịchọta ndụ m iji mụta otu esi eme ya na Drupal.
N'ihi na enwere ozi na enyemaka na Spanish na Bekee. Ọ na-ewe ọtụtụ ihe iji chọta ihe ụfọdụ maka Drupal na ọtụtụ ihe ga-enyere gị aka. Abụghị m onye mmemme ma ọ bụ onye mmebe, ma ọ bụ ihe ọ bụla dịka nke a na m ga-achọta ndụ m iji melite blog. Na agbanyeghị na m ka hụrụ Drupal n'anya, nke bụ eziokwu bụ na ịdị mfe nke wordpress bụ nnukwu isi na ihu ọma ya.
Mbugharị ahụ adịghị nwayọ ma na-egbu mgbu. Emeela m ọtụtụ njem site na Drupal na WordPress, mgbe niile site na blọọgụ ndị ọrụ naanị ya na otu ụdị ọdịnaya. Nakwa Drupal 5.x na 6.x na wordpress 3.x ma na Drupal 7 Enwere m nsogbu na ọ gwakọtara ọdịnaya na aha na ndị edemede, na mgbakwunye na ijikwa urls, nke anyị na-enweghị akpaghị aka.
Ọtụtụ ọrụ aka mana echere m na nsonaazụ ya kwesịrị ya.
Nhọrọ nke logos
N'abalị taa na 00.00 oge njedebe maka nyefere akara ngosi maka asọmpi ahụ ha ka na-ezigakwa anyị.
Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime ndị zitere dị ezigbo mma, m ga-ajụkwa gị otu ma ọ bụ nke kachasị amasị gị. Yabụ, ọ na-ejikọ na blọọgụ na ọgbakọ ma na-anọchite ntakịrị nke weebụsaịtị a.
Nke a bụ 8 nke masịrị m nke ukwuu. Ha nọ n'usoro abidii n'usoro ha chọrọ
5.- Jamie Shoard
6.- Jamie Shoard nke abụọ
7.- Nwanyị Ligeia
8.- Atụmatụ Siah
Nwere ike ịhụ logos niile ezitere na http://99designs.com/contests/7757
Ọ bụrụ n’ịchọ nke na-anọghị ebe a, ị nwere ike ikwu maka ya, agbanyeghị na a ga-ahọrọ onye mmeri n’etiti ndị a.
Ekele na ekele n'ọdịnihu maka echiche gị
3 kwuru banyere «Gbasara Anyị»
Febụwarị 28, 2014 na 2:23 am
Ndewo, olee otu m ga esi ebipụta na ibe gị? ma ọ bụ m na-ezitere gị ozi maka post. Daalụ
Eprel 26, 2014 na 11:22 am
Ndewo, aha m bụ Jose Luis na-amasị m ihe ọhụụ, m na-eche mgbe niile banyere ihe, echiche wdg.E meela ụfọdụ ihe m nwere n'ụlọ dịka ịweghachi mmiri maka ịsa ahụ na ebe ịsa ahụ maka ụlọ mposi, igwe m. Martians na ụfọdụ echiche m enwetabeghị iji mejuputa n'ihi na anaghị m elekwasị anya na ha, ọ bụrụ na m nwere ike igosipụta ha ma kesaa ha, echere m na m ga-achọ ya nke ukwuu.
Jenụwarị 19, 2016 na 9:52 pm
Ndewo, a na m ewetara gị akwụkwọ site na Dominican Republic.na eziokwu bụ na m bụ otu n'ime ndị nwere mmasị na ọrụ igwe CNC a. Abụ m onye obodo. Mana m na-etinye aka na ime ụlọ na imepụta ihe .. M na-akwadebe. mụ na ụlọ ọrụ m emeela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ igwe niile ahụ ... ana m eme ya n'ihi na achọrọ m igosipụta onwe m ihe m bụ, ọ bụghị ego kpatara nsogbu ịzụta igwe niile.Achọrọ m ime ya kemgbe m nọ O nwedịrị mgbe m mere ọpụrụiche na nkà mmụta banyere igwe. iji mee mbinye aka m rụọ igwe m niile. O kwa m swearuru gi iyi, ezigbo nwa nwoke ... ugbua ka anyi rida n’oru ahia ... oburu na m choro ime otu igwe a na onodu ulo oru, kedu udi igwe m nwere ike iji mee? Kizas bu otu? Ma ya na voltaji di elu 220 -110v.